Vaovao - Shanghai Copak Industrial Co., Ltd. Biraon'ny famokarana ao Shanghai
Shanghai Copak Industrial Co., Ltd. Biraon'ny famokarana ao Shanghai
Shanghai COPAK Industry Co., Ltd. natsangana tamin'ny 2015, miaraka amin'ny biraon'ny varotra any Shanghai sy ny ozinina mifandraika amin'izany ao Zhejiang. COPAK dia mpamatsy matihanina amin'ny vokatra ara-tsakafo sy zava-pisotro mahasoa ny Eco: kaopy PET, tavoahangy PET, vilia taratasy, sns.
Ny biraonay any Shanghai dia miompana indrindra amin'ny varotra iraisam-pirenena sy ny fampidirana mpiasa matihanina. Ankoatry ny PET CUPS, PET BOTTLES, PAPER BOWLS, afaka mivarotra vokatra hafa koa isika. Ny ekipanay sourcing matihanina dia afaka manome vokatra avo lenta sy vidin'ny fifaninanana. Hamafisinay ny fanaraha-maso 100% alohan'ny fandefasana.
Ny biraon'ny sourcing any Shanghai dia miasa toy ny dingana manaraka.
Rehefa maniry zavatra tsy vokarintsika ny mpanjifa (omena ny orinasa PET CUP, PET BOTTLE AND PAPER BOWL) dia hojerentsika ny antsipiriany rehetra ilaina ao anatin'izany ny loko, ny endrika, ny fampiasana ary ny fanontana na ny famonosana, avy eo hanome ny vokatra mety izahay ho anao ary mahazo vidiny amin'ny ozinina. Aorian'ny fampitahana ny kalitao sy ny vidiny dia hitsidika ny ozinina izahay ary hanombatombana ny ozinina avy amin'ny lafin-javatra maro toy ny tsipika famokarana, ny fahaizan'ny famokarana, ny tontolon'ny orinasa ary ny fifehezana kalitao. Avy eo dia hisafidy ny tsara hiaraha-miasa isika. Rehefa vita ny famokarana azy ireo dia handefa mpanara-maso kalitao natokana hijerena ireo vokatra izahay. Avy eo dia azo alamina ny fandefasana.
Mety manahy ny kalitao ny olona sasany. Raha ny marina dia manao fizahana kalitao 100% izahay alohan'ny fandefasana. Ary koa manana rafitra miantoka kalitao izahay. Raha tena mahita olana amin'ny vokatray ianao dia mandefasa horonan-tsary sy sary fotsiny. Handefa entana tsara kalitao indray izahay fa tsy ny vokatra Manimba intsony.
Momba ny vidiny dia tsy maintsy mifaninana izy io. Nahazo vidiny izahay taorian'ny fampitahana ireo orinasa 15 farafaharatsiny. Tsy manana tombony firy izahay. Tsy manana 10% fotsiny ny politikan'ny tombom-barotra. Hainay kokoa ny tsena sinoa ary afaka mahita mpamatsy tsara ho anao. Azonao atao koa ny mividy izay tadiavinao aminay, tsy mila mitady mpamatsy ianao. Mety ho fantatrao fa sarotra be ny mahita mpamatsy ary tsy mora ny mahita zavatra tsara.
Afaka miteny anglisy, Espaniôla, Arabo ny mpiasanay. Aza misalasala mifandray aminay fotsiny. Ny mailaka, ny fifampiresahana an-tserasera, na ny antso dia ekena avokoa.